ကား ဒုက္ခ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကား ဒုက္ခ
Posted by ကထူးဆန်း on May 14, 2013 in Community & Society | 14 comments
ပြောရရင်တော့ ထုံးစံ အတိုင်းလေပွတာပေါ့ ။
အင်းလေးဇုန်မှာ ဟိုတယ် တွေ ကို တွန်းအားပေး တည်ဆောက်ခိုင်းနေပါတယ် ။ ဆောက်တဲ့ သူလည်း ဆောက် ။ ဆောက်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ သူလည်း ဆောင် ။ ပိုင်ရာနိုင်ရာတွေကလည်း အဖြစ်လောက် ပစ္စည်းလေးစုပြ ။ ခြံစည်းရိုးလေး ခတ်ပြ အမျိုးမျိုးပေါ့ ။ အဲ့ဒါက အခုအသစ်ဖော်တဲ့ ဟိုတယ်ဇုန် မှာ မဟုတ် ။ ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ထားကြတဲ့ မိုင်းသောက်တို့ ။ အင်ကြင်းကုန်းတို့ သလဲဦးတို့ စသဖြင့် ရွာလေးမှာပါ။
အသစ်ဖော်နေတဲ့ ဟိုတယ်ဇုန်မှာလည်း အကွက်တွေ ဖော်ပြီး မဲနိုက်လို့ ရောင်းချပြီးသွားပါပြီ။တစ်ဧက သိန်း ၇၅၀ ကနေ ၉၅၀ ဈေး အထိ စုစုပေါင်း မြေ ဧက ၄၆၅.၅၀ဧက ရောင်းချခဲ့ပါသည် ။ အဲ့ဒီ့ ရောင်းချခဲ့တဲ အကွက်တွေကို ခြောက်လ အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်လို့ လဲ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားပါတယ် ။
အဲ့ဒီလို တွန်းအားတွေပေးတော့ ကားကြီးကားငယ်အသွယ်သွယ် ဟာ ညောင်ရွှေ နန်းပန် ကားလမ်း ထဲ တစ်ဖွဲဖွဲ ၀င်ရောက်လာကြတော့တာပါဘဲ။
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ သယ်လာတဲ့ ကားတွေက လည်း ပစ္စည်း အပြည့် ကုန်ချိန် အပြည့် ၀င်ရောက်ကြတော့တာပေါ့ ။ ခုခောတ် ကားတွေဆိုတော့ ကုန်တန်ချိန် အနည်းဆုံး ၁၇ တန် လောက် တင်လာမှ ရန်ကုန်ကနေ လာပို့ ရတာ တွက်ခြေကိုက်ကျမှာ မို့ ၀င်လာတဲ့ ကားနဲ့ တံတား ရဲ့ ခံနိုင်ရေ အားက ဘယ်လိုမှ မျှဖို့ မလွယ်တော့ဘူးလေ ။
ပြန်ကဲ့ဖို့ ဆိုတာကလည်း ဘယ်သူ အကုန်ခံ ကဲ့ နိုင် ကဲ့ ခြင်ကြမှာလည်း ။
တစ်ဘက်ကလည်း အတင်းဆောက်ခိုင်း ။ တစ်ဘက်ကလည်း အလေးချိန် ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ။ ဘယ်တော့ ဘယ်သူ ကတော့ ကံဆိုးသူ မောင်ရှင်ဖြစ်လို့ လျော် ရလေမလဲ ဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ပေါ့ ။
တံတားကျိုးသွားလို့ တင်လာတဲ့ သစ်တွေ ကို ပြန်ချ နေရတဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်
ခံနိုင်ဝန် ၁၃ တန် သတိပေးတားမြစ်ချက်နဲ့ အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် အနီကို မသိကျိုးကျွန်ပြု ဖြတ်နေကြရရှာတဲ့ ကားကြီးတွေ
၁၃ တန် သာ ခံနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သစ်သားတံတားငယ်တစ်ခု
မိုးကလည်း ကျတော့မယ် ။ တံတားတွေက လည်း ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ။ ရေဘူးပေါက်တာ လာမပြောနဲ့ ရေပါတာဘဲ လိုချင်တယ်ဆိုတော့ လဲ …
ဒါကတော့ ဒီနေ (၁၄-၅-၂၀၁၃)့  မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၀၄-၄ နားမှာ ပက်လက်လန်သွားတဲ့ ခရီးသည် ယာဉ်ပါ ။ ဂန္ဓ၀င် ဆိုတော့ ရန်ကုန်မှ တောင်ငူ သွားသော ကားလို့ထင်ပါသည် ။ ဖြစ်ပွားစဉ်မှာ တော့ ခရိးသည် အသက်ဆုံးရှုံး ခြင်းတော့ မရှိဘူး ။ ဒါဏ်ရာ ရသူ တွေတော့ ရှိတယ် လို့ သိခဲ့ ရပါသည် .
သူကြီး ဆာဗာ လေးမှာ စိုးလို့ နှစ်ပုံလောက်ဘဲ တင်တော့မယ်နော် ။
ခရီးသည်တင်ကားတွေကလဲ ကားလမ်းတွေကောင်းလာကာမှ ပိုပြီးမှောက်ကြ တိုက်ကြ တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကားတွေကလဲ ကောင်းလာတော့ နင်းတိုင်းထွက်တာရယ်….
ယာဉ်မောင်းလိုအပ်ချက်က ရုတ်တရက်ကြီး မြင့်တက်လာတော့-
သင့်တော်တဲ့ ယာဉ်မောင်းသင်အစီအစဉ်မျိုးလဲ တနိုင်ငံလုံးအတွက် မလုပ်ခဲ့တော့-
(တကယ်တော့ ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဲသလိုလုပ်ရမယ်မှန်းတောင်သိလောက်တဲ့ ပညာမျိုး လုံးဝမှမရှိတာ)
ဖြစ်သလို ကားမောင်းသင် ၊ တွေ့တဲ့လူ တက်မောင်းကြတာရယ်ကြောင့်….။
ကားနဲ့သူ့အင်ဂျင်နီယာပညာတွေအကြောင်းနားမလည်တဲ့..ကား ဘော်ဒီ..၀ပ်ရှော့ဆရာတွေ လေးပိုး.. ဖရိမ်ဆင့်.. အင်ဂျင်လဲပြီး.. ကုန်မတရားတင်နိုင်အောင်လုပ်တာ.. တော်တော်ကြီးတဲ့ပြဿနာလို့..ဆိုချင်မိတယ်…။
. လမ်းပျက်တယ်.. တံတားကျိုးတယ်.. ကားမှောက်တယ်..လူသေတယ်..စသဖြင့်… တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခများကုန်တာပဲ..။
လမ်းဒုက္ခ ကားဒုက္ခ တွေက ဘဲဥအစရှာမရသလိုများ ပြောရမလား မသိဘူး။
တက်သလောက် နင်းးးးး ပြီး
ကွန်တိန်နာတင်ကားကြီးတွေ၊ ကုန်တင်ကားကြီးတွေ လူစီးကားလေးတွေကို ၀ုန်းဂျိန်းမြည်အောင် ကျော်တက်သွားတာတွေ တွေ့တွေ့ပြီးးးးး
ဟုတ်ပါ့မမရေ ဘုရင့်နောင်လမ်းမှာဖြင့် ကွန်တိန်နာတွေ ကားမောင်းပြိုင်ပွဲဝင်သလို အတင်းမောင်း လုမောင်း ကျော်တက် နေတာနေ့စဉ်မြင်နေရတာမို့ နေ့တိုင်းဘုရားတပြီးကုသိုလ်ရနေပါရဲ့။ ဘတ်စ်ကားတွေလုမောင်းတာ နားလည်လို့ရပေမဲ့ ကွန်တိန်နာတွေ ပြိုင်ပွဲဝင်တာလေးကိုဖြင့်နားမ လည်နိုင်ပါကြောင်း။
ဆိပ်ကမ်းထဲမှာ ကွန်တိန်နာ ကားတွေ စီနီယာ ကားတန်းစီရတယ်.. အဲ့ဒီ အတွက် အမြန်ချ ပြီးရင် နောက်တခေါက် ဆွဲလို့ ရဖို့ ကားအမြန်မောင်းနေကြတာ.. အင်ဂျင်ကလည်း ကြီးတော့ နင်းရင် နင်းသလောက် တက်တယ်။ ဘေးက ကားသေးတွေက အဲ့လို လုမောင်းတဲ့ ကားကြီးတွေ တွေ့ရင် အလျော့ပေးရမြဲပဲလေ။
ခရီးသည် ယာဉ် မှောက်ပုံက ကြောက်စရာကြီးပါလား…
ကားမြေအိ၍ကားဘီးကျွံပြီးမှောက်ပါသည်။ ၅း၅း၂၀၁၃
မြန်မာ ပညာသျှင်များက “ဝန်တင်ကုန် ၂ဆတိုးမြင့်ကြ” ဆိုပြီး…
ကုန်တင်/ခရီးသည်တင် ယာဉ်တွေကို လေးပိုး ဖရိမ်ဆင့် အဆင့်မြှင့်လိုက်ကြတာ…
ဆောက်လုပ်ရေးက ခိုးစားထားလို့ ဝန်ခံနိုင်အားမပြည့်တဲ့ လမ်းတံတားတွေနဲ့တွေ့တော့..
အဲ… ကိုရွှေယာဉ်မောင်းများ မောင်းပုံကလည်း…
ဘိုးရင်းလေယာဉ်ပိုင်းလော့တွေ သေပြီး ပြန်ဝင်စားသလား အောက်မေ့ရတယ်…
ရေဘူးပေါက်တာ လာမပြောနဲ့ ရေပါတာဘဲ လိုချင်တယ်ဆိုတော့ လဲ …
ဟီ ဟိ အဲသာဆိုရင် ဗိုက်ထဲထည့်ပြီး သယ်လာပေးမယ်လေ…
ခရီးသည်ကားတွေမှောက်တဲ့ထဲမှာ တစ်ချို့က ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်လို့လည်း ပါတယ်လို့သိရတယ်။
ကားတွေကကောင်း အော်တိုဂီယာနဲ့ ပြီးတော့အဲကွန်းပါတော့ ယာဉ်မောင်းက သက်သာစွာမောင်းရင်းရတယ်လေ။ ပြီးတော့ရပ်နားတဲ့နေရာမှာ ထမင်းစားပြန်တော့ ထမင်းဆိုင်တွေက ယာဉ်မောင်းဆို ပိုက်ဆံမယူ အလကားကျွေး အဲဒီမှာ အ၀အပြဲအုပ် ပြီးရင် အဆီရစ်ကာ အိပ်ငိုက် လာတော့ဖြင့် ………။ အဲလိုပါဗျ။
သဂျီးကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် လူကြောင့်တဲ့… ဒီတခါတော့ ကထူးဆန်းက ပြောတယ်… ကားကြောင့်တဲ့… မှန်အိ.. လူတယောက် အလေးချိန် တတန်ဘယ်နည်းနဲ့မှ မရှိနိုင်.. ကားကြတော့ ကုန်ပါပေါင်းလိုက်ရင် တန်၂၀လည်းဟုတ် တန်၄၀လည်းဟုတ်…. ကိုင်း ဘာပေါဂျင်သလဲ ဦးခိုင်စ်… :hee:
ကားသမား အုံနာတွေ အနေနဲ့ ကလဲ
လမ်းပေးရတဲ့ ဘာကြေး ညာကြေး ဂိတ်ကြေး အာလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ။ တစ်နှစ် ကို တစ်ခါ အခွန်ဆောင်ရတာ က ရှိသေး ။
တန်ပို မတင်ရင် မကိုက်ပြန်ဘူး
တန်ပိုမတင်တော့ စားဖို့ သောက်ဖို့( ကိုအောင်ပု ၊ ကိုကြောင်ကြီးတို့ လို မဖတ်ရ ) မရ
ကားခ က တိုးတောင်းရင်လဲ ကုန်သည်က မပို့ ပြန်တော့
လက်ညှိုး တစ်ချောင်းနဲ့ ဟိုဒီ လိုက်ထိုး နေရင်တော့ ပြီးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဗျို့  . . . . . . အဲ့ ကိစ္စ တွေက တိုင်းသူပြည်သား တွေရဲ့ . . . စားဝတ်နေရေး နဲ့ အဓိက ပတ်သက် နေတာမို့ . . . တော်တော် သိမ်မွေ့ တဲ့ ကိစ္စ တွေ မို့ . . . . ရင်လေး မိတယ်ဗျာ . . အကြံ တစ်ချက် တော့ လွယ်လွယ် မပေးချင်ဘူး ဗျ . . . . . စားရင်း ပိတ်လိုက်ရင်တော့ . . . . မပိတ်ချင်ကြသေးနေမှာပါဗျာ . . ပိတ်လို့ လဲ မဖြစ်သေးဘူး ဗျ . . :harr:
ကိုပေါက်တို့လို ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့သာ လက်စွမ်းပြမယ်ဆိုရင်
ကျုပ်အင်တာနယ်ဟာ့ဒ်ဒစ် အိတ်စတာနယ်ဟာ့ဒ်ဒစ်တွေ ဓါတ်ပုံထည့်တာနဲ့
လမ်းကလဲမစွံ့ ကားကလည်း ပင်ဂိုရုပ်မရှိ ပင်ဂိုအနေအထားမရှိ
မြန့်မာ့နည်းမြန့်မာဟန်နဲ့ ဟိုလျှောက်လုပ် ဒီလျှောက်လုပ်လုပ်ကြသူတွေကအများသား……
ဝိုးးး ဟိုကားဂျီး ဟိုလိုဖစ်ဒါ …
ခရီးသည် အသေအပျောက် မရှိဘူး …
ခု ပုံစံ ကြည့်ပီး .. ဘယ်နှီယောက် သေဆုံးတုန်း တွက်ချင်စရာ …
ဒါ့ထက် .. ကား ကုန် တံတား သေချာ စဉ်းစားပြီး လုပ်သင့်တယ် …
အဝေးပြေး ကားတွေဆို တံတား ပျက်နေရင် သေပီချာပဲ ..
အတော် ဒုက္ခရောက်တာ …